Fba Headway, Fba Logistics, Fba Amazon, Fba Shipping Ddp-YiXing
I-FBA FCL ngolwandle
I-FBA LCL ngolwandle
Inkonzo enexabiso elongezwe eTshayina
UkuGcinwa koGcino lwaMazwe ngaMazwe lweFBA
I-FBA ibuyisa iimpahla e-China, Inkonzo yokugcina izindlu e-China
Ukuhanjiswa kweFBA FCL, LCL
Impahla, uHlelo lokwahlula umnqwazi
Ngaphandle, iZinto zeMidlalo
Ukwahlulahlula kwe-Grill yangaphandle
Ukuhlelwa kweebhokisi zokugcina
Ukwahlulahlula iiMveliso zeCeramic
Udidi lwezinto zokuhombisa
I-YIXING International Logistics (i-Guangdong) Co., Ltd. yasekwa ngo-Agasti ka-2006, ukusukela oko yasekwayo, besibonelela ngothotho lwezisombululo zokuhambisa zamanye amazwe kwimizi-mveliso yokuvelisa yemveli, iba nguvulindlela kulwandle lokuhanjiswa kwempahla ye-Sino- US umgca okhethekileyo .
Ngamaxesha onke, inkampani yethu ikhethekileyo kuphuhliso lwezothutho lwe-Sino-US lwamazwe aphesheya ezothutho, ezinje ngokuhambisa i-FCL kunye ne-LCL, indawo yokugcina impahla e-United States, ukuhanjiswa, umnyango nomnyango ukuhanjiswa, iinkonzo zase-United States zokuhanjiswa kwempahla, ziwela umda Ulawulo lokuhanjiswa kwempahla kunye noluhlu olupheleleyo lweenkonzo zokuhanjiswa kwemida.
Isofa kufuneka ikhethe ukuhanjiswa kwe-FBA elwandle
U-Miss Lin ungumthengisi wenkampani yorhwebo eDongguan, isofa ephambili ethengiswa kulo lonke ilizwe. Ukuze uthengise ngcono isofa, uMiss Lin wavula ivenkile kwiqonga leAmazon.
I-YiXing Global Logistics iseke ubudlelwane bexesha elide kunye nobuhlobo kunye neenqwelomoya ezininzi zaseMelika ezinje ngeUPS, iDHL, Federal, United Airlines, njl.
I-FBA FCL kunye ne-LCL eya e-US
Sinamaxesha amane ngeveki ukuhambisa ngokuthe ngqo eLos Angeles, e-USA, ukuguga ngokukhawuleza, amaxabiso aphantsi. Sinokubonelela ngokuphindwe kabini kwirhafu yokucaca kwenkonzo yomnyango.
JONGA ZONKE IZITHUBA ZEBlog
Imithombo yeOVS Warehouse
Ukubonelela ngokwamkelwa kunye nokuhanjiswa, ukuhlelwa, iilebheli, ukufakwa kwePallet, ukugcinwa kwexesha elifutshane njl njl.
Amandla aSiko aMandla
Sinamagqala abarhwebi bamasiko anolwazi oluphangaleleyo kwimigaqo yeMpahla ethengwayo yelizwe elingeniswa elizweni, enerekhodi ecacileyo kwiiMpahla zeMpahla.
Ukusebenza okuzinzileyo kwexesha kwi-FCL & LCL
Uhlolisise umgca wokuhambisa osebenzayo kunye osebenzayo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, ukubonelela ngomnyango kwindlu ngendlu kubathengi baseAmazon kwihlabathi liphela, ngokukhawuleza, ngokulula, ngexabiso eliphantsi!
Idilesi: I-4 iHujie Xihuan Road, iGangKou Avenue, iDongGuan, China
Zithini izizathu ezichaphazela iAmazon ...
Ixabiso lenkonzo ye-Amazon FBA yokubuya ...
IAmazon irhoxisa njani umthengi ongahlawulwanga ...